fanomanana ny vanim-potoana - magazine "Potato System"
Tena Label fiomanana amin'ny vanim-potoana
Label: fiomanana amin'ny vanim-potoana
Manodidina ny 7,8 hekitara no hambolena legioma amin'ny tany malalaka any amin'ny faritr'i Moskoa amin'ny 2021
Ny minisitry ny fambolena sy ny sakafo any amin'ny Faritra Moskoa, Sergei Voskresensky, dia nanao fitsidihana niasa tamina distrikan'ny tanànan'ny Dmitrovsky an'ny Faritra Moskoa. Tany ...
Ny faritra Smolensk dia hampitombo ny faritra ovy
Nisy ny fivoriana niasa tao amin'ny fitantanan-draharaham-paritra notarihin'ny Governora Alexei Ostrovsky, hiadian-kevitra momba ny fahavononan'ireo mpamokatra fambolena any amin'ny faritra Smolensk ...
Amin'ny 2021, andrasana ny fitomboan'ny fambolena betiravy, voninkazo ary ovy
Ny Ministeran'ny Fambolena ao amin'ny Federasiona Rosiana dia manantena ny fitomboan'ny voangory siramamy sy ny tanamasoandro amin'ny 2021. Io no nambaran'ny lehiben'ny departemanta Dmitry Patrushev tao ...
Ao amin'ny faritra Saratov dia mikasa ny hahazo ovy 135 XNUMX taonina izy ireo amin'ny vanim-potoana vaovao
Ny faritra nafafy tany amin'ny faritra tamin'ity taona ity dia hahatratra hatrany amin'ny 4,1 tapitrisa hektara, ka ny voam-bary sy leguminous dia hipoka 2,3 ...
Perm manampahefana dia manome onitra ny tantsaha 30% amin'ny vidin'ny fividianana zezika mineraly
Ny manam-pahefana ao amin'ny Ter Teritory amin'ity taona ity dia mikasa ny hanonitra ireo mpamokatra fambolena any amin'ny faritra 30% amin'ny vidin'ny fividianana zezika mineraly amin'ny fifanakalozana, momba ity ...
Mikasa ny hampitombo ny faritra amin'ny ovy ny faritra Samara
Ny minisitry ny fambolena sy ny sakafo any amin'ny Faritra Samara Nikolai Abashin dia nanao fivoriana momba ny fampandrosoana ny ovy maniry any amin'ny faritra. Raha ny hetsika ...
Ny faritra nafafy tao Kuzbass dia hitombo
Tamin'ny fivoriana iray tao amin'ny fitantanan'ny governemanta Kuzbass, niresaka momba ny fahavononan'ny mpiasan-doha amin'ny asa lohataona. “Misy programa hanohanana ireo mpamokatra fambolena ao Kuzbass. ...
Ny lohataona maharitra iray dia afaka mampahalemy ny voly: ny loza mitatao amin'ny fijinjana amin'ny ho avy
Ny ririnina feno lanezy dia namonjy ampahany betsaka tamin'ny voly ririnina izay niaritra ny toetr'andro maina tamin'ny fararano. Ny hamandoana be amin'ny lohataona dia ho mahazatra amin'ny ankamaroan'ny faritra ...
Ireo faritra nafafy tamin'ny vanim-potoana vaovao dia hitombo
Ny faritra nafafy tamin'ny 2021 dia hitombo 600 hekitara raha oharina tamin'ny taon-dasa ary hahatratra 80,5 tapitrisa, avy ...
Miomana amin'ny vanim-potoana vaovao. Ahoana ny fomba hisafidianana karazana?
Ririnina sy mangatsiaka ny ririnin'ity taona ity any amin'ny ankamaroan'ny firenena. Na izany aza, tsy ho ela ny fiandohan'ny vanim-potoana dia vanim-potoana mafana, ka ...
Amin'ny alin'ny vanin-taona mafana
Famonosana ovy: kitapo taratasy vita amin'ny 100%